Tukaana Siree Mana Jireenyaa Keessatti Too’achuu | Let's Beat the Bed Bug!
Tukaana Siree Mana Jireenyaa Keessatti Too’achuu
Yeroo itti tukaana siree mana keessatti too’achuuf yaallu:
Qoricha farra ilbiisotaa qonnaa fi ooyiruu irratti HIN fayyadaminaa.
Oomishoota “manatti tolfaman” yookin “ oomisha heeyyama hin qabne” iddoo kan hin qabne HIN fayyadaminaa.
Malli milkaa’an ittiin tukaana siree too’atan ogeessa to’annaa ilbiisotaatiin qorichi keemikaalaa fi ho’aa bifa qindaa’aa ta’een yoo hojiira oole dha. Haala gaddisiisaa ta’een gatiin OTI mi’aa ta’uu isaati. Kanaafuu odeeffannoo waa’ee to’annaa tukaana siree irratti kennaman toora interneetii irraa ofumaa argachuun ni danda’ama.
Tukaana siree ofii keetiif to’achuun baay’ee ulfaataa fi kan yeroo fudhatudha. Teessoo, meeshaa manaa fi dhuunfaa iddoodhaa sochoosuu nama gaafata. Kutaa tokkoon tokkon isaa akkamitti akka sakataatu karoorsi. “Naannoo qulqulluu” uumuuf dhama’ai.
Tukaana harkaan ajjeessuun haraka 100% milkaa’aa miti, garuu hanaga tokko lakkofsa isaanii hir’isuuf ni gargaara. Qabdee ajjeessuu yookin meeshaa battee irratti guuruu ni dandeessa.
Meeshaaleen tukaanota funaanuufi balleessuuf fayyadan: Tiriika, kaardii moofaa, teeppii qulqulluu, boorsaa pilaastikii, huccuu fi bishaan ho’aa.
Sadarkaawwan: Tiriikaa fi kaardii moofaatti fayyadamuun tukaana siree horqa keessaa gara fuulduraatti baasi. Shibootti fayyadamuun tukaana siree harkisi. Bishaan daffaatti fayyadamuudhaan naannoo tukaana siree, hanqaaquu fi gogaa isaanii qulqulleessi.
Iddoo duwwaan hatatamaan tukaana sireeakka qabnuuf nu gargaara. Ujummoon iddoo duwwaa kun naannoo dhoohaa manaa, meeshaalee elektriikaa, hirkoo siree, akkasumas bakka tukaanni siree dhokachuu danda’an kanneen akka siree, boraatii, fi kkf tti hojii guddaa qaba. Gosa iddoo duwwaa kaanisteriitti fayyadamna yoo ta’e, qabiyyee sana hatattamaan gara boorsaa pilaastikiitti garagalchuun duwwaa gochuun cufuu qabda. Iddoo duwwaa sana qulqulleessi. Yoo iddoo duwwaa sana boorsaa wajjin fayyadamata taate, boorsaa sana fuudhii gara iddoo balfaan gatamuutti geessi. Iddoo duwwaa sana keessatti tukaanni siree maxxanee hafuun akka wal hin horre qulleessi.
Malli huccuu miicuu tooftaa huccuu maashina miiccuu fi gogsuu keessa kaa’aminif fayyadu dha. Huccuu faalaman boorsaa pilaastikiitti naquudhaan hanaga miicamanitti ukkaamsuun caarraa tukaana siree akka hin babal’annee taasisu. Sadarkaa hoo’inaa isa ol’aanaa maashinni heeyyamuun miiccuun gogsuu. Yoo miiccamuudhaaf baate, hanaga daqiiqaa soddomaa maashina keessa tursiisuun akka tukaana siree fixu taasisa.
Hurki yoo seeraan itti gargaaramne baay’ee bu’a qabeesssa. Hurkisiistuu koomershaalii tokkoof yoo xiqqaate bishaanii gaalonii 1 itti naqi. Hurki kun teessoo fi mana keessattif fayidaa guddaa qaba. Hurki kun haala bu’a qabeessa ta’een tukaana siree akka ajjeesuuf sadarkaan hoo’a 160-180°F ta’iitu irra jiraata. Safartuu hoo’a erga ilaallee booda teermoomeetiritti fayadamuun too’achuu qabda. Hurki ibidda bobeessuun balaa uumuu waan danda’uuf of eeggannaa guchuun barbaachisaa dha.
Qabbaneessuun mala salphaatti tukaana siree ajjeessuu danada’u dha. Wanti si barbaachisu meeshaa qabbaneessituu duwwaa dha. Qabbaneessituu kanaan tukaana siree fixuu yoo barbaadde meeshaa barbaaddu qabbaneesituu kana teepreecharii 0oF gaditti guyyaa afuriif tursiisuu qabda. Qabaneessuunis balaa mataa isaa waan qabuuf maal akka qabaneessituuf of eeggadhu.
Boraatii sukkuumuun tukaanni siree akka hin dhokkanne taasisa. Yoo boraatiin faalame, akka hanqaaquun sun wal hin horreef haguugi, sana booda du’uu jalqabu garuu yoo xiqqaateef ji’oota 18 tusiisi. Dabalataan, faalamni haaran yoo argame haguugdun boraatii sun salphaatti qullaa’uu danda’a. Haguugduu boraatii tukaana siree hir’isuuf gargaaran biti, kun immoo hanaga tokkoo ni dhoowwa garuu guutummaatti tukaana siree hin balleessu.
Gogaa hoo’isuun malli tukaana siree to’achuuf taasifamu milkaa’adha. Tooftaan kun kan inni hojiirra ooluu qabu tukaana siree mana keessatti akka hin hafneef ogeessa to’annaa ilbiisotaatiin ta’uu qaba. Mala gogaa hoo’isuu kana ofii keef itti hin fayyadamiin.
Qoricha farra ilbiisotaatti fayyadamuun tukaana siree hir’isuuf namoota heduu biratti akka tooftaa baramaatii fudhatama. Yeroo qoricha farra ilbiisotaatti fayyadamanu garuu akkaata ajajja isaatti hojiirra oolchuu qabda. Qoricha kanatti fayyadamuun dura ogeessa to’annaa ilbiisotaa qacaruun akka nu gargaaru taasisuun filatamaa dha. Qoricha farra ilbiisotaa gosa kan biraatiif ajajame tukaana sireetiif yoo fayyadamte naannoon sun caalmatti tukaana sireetiin akka faalamu taasisuu waan danda’uuf of eegannaa gudhachuun barbaachisaa dha.
Bed Bug Control in Residences PDF oromo